जान्नुहोस् कहाँ बन्छ आइफोन, कति आउछ लागत ? « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
जान्नुहोस् कहाँ बन्छ आइफोन, कति आउछ लागत ?
८ फाल्गुन २०७३, आईतवार १२:२३
एजेन्सी । आइटिका प्रेमीलाई बढी नै चर्चा र चासो हुने गर्छकी यो उत्पादन कहाँ बन्छ ? कि चाइनामा नै बन्छ या क्यालिफोनियामा नै बनाईन्छ ? कति लाग्छ लागत ? यसको निर्माणको बारेमा केही तथ्यहरु यहाँ प्रस्तुत छन् ।
वर्तमान अमेरिकी राष्टपति डोनाल ट्रम्पले एप्पलको सिइओ टिम कुकसंग मिलेर एप्पललाई युएसमा नै बनाउन आग्रह गरेका थिए । उनले यसलाई कर्पोरेट ट्याक्समा भारि छुट नै दिने बताएका थिए । यो भन्दा अगाडी बाराक ओबामाले पनि एप्पलका उत्पादन युसमा नै बनाउन सिधा सम्पर्क गरेका थिए ।
तर,प्रश्न उठ्छ की फोनका बाँकी उत्पादन पुरै कहाँ बन्छ । तर जबाफ हुन सक्छ जहाँ पनि । एप्पलको फोन बनाउन धेरै देशका कम्पनीहरु लागेका हुन्छन् । एप्पलको राम्रो पक्ष के छ भने उसले आफ्ना उत्पादनको पार्टस अलग अलग देशमा बनाउछ । सबै भन्दा बढी स्क्रीन डिस्प्ले जापानमा बनाउछ । केही डिस्प्ले कोरियामा एलजीद्धारा नै बनाउछ । टच आइडी सेन्सर ताइवानको टिएएमसि कम्पनीले बनाउछ । यस्तै अलग अलग पार्टस बनाउने कम्पनीको नाम लामै छ ।
तपाईले यो थहाँ पाएर हैरान हुनु हुन्छ की एप्पलको दुनिया भर २०० भन्दा ज्यादा सप्लायर्स छ । एप्पलका उतपादनमा मेडइन चाईना लेखेको हुन्छ । यसको एउटा मात्रै कारण छ । एप्पलको डिवाइस अधिकरुपमा असेबलिंग चाइनामा मात्रै हुन्छ । त्यस पछि पुरा हुनका लागि दोस्रो देशमा पठाइन्छ ।
रिसर्च फर्म आएचएसले बताए अनुसार आइफोन ६ प्लसको लागत १३६ डलर हुन आउछ यही १६ जीबी मोडलको एप्पल ७४९ डलर अर्थात ३ गुणा बढी बेच्छ ।
२०१६मा रिसर्च फर्म आएएचयसले एप्पल आइफोन एसइको लागतको खुलासा गरेको थियो । रिपोटमा भनिए अनुसार एसइ मोडलको कुल लागतमा १६० डलर हुन आउछ । यसले कम्पनीको ३८० डलर बच्न आउछ ।
एउटा रोचक कुरा के छ भने एप्पलको फोन स्टोरेज १६ जीबीबाट बढाएर ६४ जीबी बनाउनमा मात्रै १७ डलर खर्च हुन आउछ । यही हिसाबले ६४ जीबी वाला फोन किन्न ग्राहकले १०० डलर भन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित : ८ फाल्गुन २०७३, आईतवार १२:२३